မနက်ဖြန် ချစ်သူများနေ့ မှာ အထီးကျန်နေမယ့် FA လေးတွေ သီးသန့်နားထောင်ဖို့ ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူးရဲ့သီချင်းလေး – Shwe Likes
မနက်ဖြန် ချစ်သူများနေ့ မှာ အထီးကျန်နေမယ့် FA လေးတွေ သီးသန့်နားထောင်ဖို့ ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူးရဲ့သီချင်းလေး
Shwe | February 13, 2020 | Celebrity | No Comments
သီချင်းကောင်းတွေ များစွာကို ရေးစပ်သီဆိုခဲ့တဲ့ ရွှေထူးကတော့ ဂီတခရီးလမ်းကို စတင်လျှောက်လှမ်းခဲ့စဉ် ကတည်းက လူငယ် ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့စေတဲ့ သီချင်းပေါင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့တာ ယနေ့အချိန်ထိလို့ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို များစွာရရှိနေတာကြောင့် အလွမ်းအဆွေး သီချင်းတွေ သိပ်မဆိုဖြစ်တော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ချစ်သူများနေ့ မှာ အထီးကျန်နေမယ့် FA လေးတွေ သီးသန့်နားထောင်ဖို့ ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူး
ဒါပေမယ့် အလွမ်းအဆွေး သီချင်းတွေနဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ရွှေထူးကတော့ မနက်ဖြန်ချစ်သူများနေ့မှာ ဆွေးနေရမယ့် တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေ အတွက် သူ့ရဲ့ သီချင်းအဟောင်းလေးကို Music Video ပြန်လည်ရိုက်ကူးပြီး အမှီတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတင်ပေးထားတဲ့ Unlucky Day သီချင်းလေးကတော့ စတင်ထွက်ရှိခဲ့စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ချစ်သူများနေ့နီးလာတဲ့ အချိန်ရောက်ရင် လူငယ်တွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေကြပါ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ရွှေထူးက သီချင်းဗွီဒီယိုလေးကို အချိန်မရှိတဲ့ကြားက ရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး “Valentine’s Day မှာ Unlucky Day မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ အားလုံးကို ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီး မျှဝေပေးခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် “လိုအပ်ချက်တွေ ရှိရင်လည်း နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ.. Shooting တစ်ဖက်နဲ့အချိန် သိပ်မရလို့ ရာသီစာလေးကျွေးချင်လို့ အမြန်လုပ်လိုက်ရတာ အားလုံးကို အားနာပါတယ်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီး ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ ရွှေထူးမအားတဲ့ ကြားထဲက FA တွေအတွက် အမှီရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ Unlucky Day ဗွီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source – Shwe Htoo
သီခငျြးကောငျးတှေ မြားစှာကို ရေးစပျသီဆိုခဲ့တဲ့ ရှထေူးကတော့ ဂီတခရီးလမျးကို စတငျလြှောကျလှမျးခဲ့စဉျ ကတညျးက လူငယျ ပရိသတျတှေ အကွိုကျတှစေ့တေဲ့ သီခငျြးပေါငျးမြားစှာကို သီဆိုခဲ့တာ ယနအေ့ခြိနျထိလို့ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ အိမျထောငျကပြွီး နောကျပိုငျးမှာ မိနျးမဖွဈသူရဲ့ ဂရုစိုကျမှုကို မြားစှာရရှိနတောကွောငျ့ အလှမျးအဆှေး သီခငျြးတှေ သိပျမဆိုဖွဈတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အလှမျးအဆှေး သီခငျြးတှနေဲ့ နာမညျရလာတဲ့ရှထေူးကတော့ မနကျဖွနျခဈြသူမြားနမှေ့ာ ဆှေးနရေမယျ့ တဈကိုယျတညျးသမားတှေ အတှကျ သူ့ရဲ့ သီခငျြးအဟောငျးလေးကို Music Video ပွနျလညျရိုကျကူးပွီး အမှီတငျပေးခဲ့ပါတယျ။ အခုတငျပေးထားတဲ့ Unlucky Day သီခငျြးလေးကတော့ စတငျထှကျရှိခဲ့စဉျကတညျးက ပရိသတျတှေ အကွိုကျတှခေဲ့တာဖွဈပွီး နှဈစဉျနှဈတိုငျး ခဈြသူမြားနနေီ့းလာတဲ့ အခြိနျရောကျရငျ လူငယျတှပေါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားနကွေပါ။ ဒီနှဈမှာတော့ ရှထေူးက သီခငျြးဗှီဒီယိုလေးကို အခြိနျမရှိတဲ့ကွားက ရိုကျကူးပေးခဲ့တာဖွဈပွီး “Valentine’s Day မှာ Unlucky Day မဖွဈကွပါစနေဲ့လို့ အားလုံးကို ဆုတောငျးပေးပါတယျခငျဗြာ” ဆိုပွီး မြှဝပေေးခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပွငျ “လိုအပျခကျြတှေ ရှိရငျလညျး နားလညျပေးကွပါခငျဗြာ.. Shooting တဈဖကျနဲ့အခြိနျ သိပျမရလို့ ရာသီစာလေးကြှေးခငျြလို့ အမွနျလုပျလိုကျရတာ အားလုံးကို အားနာပါတယျခငျဗြာ” ဆိုပွီး ဗှီဒီယိုလေးနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။ ရှထေူးမအားတဲ့ ကွားထဲက FA တှအေတှကျ အမှီရိုကျကူးပေးခဲ့တဲ့ Unlucky Day ဗှီဒီယိုလေးကို ပရိသတျကွီး အတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ Source – Shwe Htoo
ချစ်သူအသစ် ရရှိနေပီ ဆိုတဲ့ လူငယ် အဆိုတော်တေးသံရှင် G-Fatt
ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မင်းသမီးကြီး မို့မို့မြင့်အောင် ရဲ့ (၃၃)နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာ SURPRISE လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေ
ပြည်တွင်းမှာ ပထမ ဆုံးအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာဆုရှင် ဆန်ခါ တင်ဇာတ်ကားစာရင်း မှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ နှစ်ယောက်